Koko muTracker tracker anoshanda sei?
Kupa vashandi nemitengo yakanakisisa, Amazon inoramba ichigadzirisa matengo. Inopa mukana kune vashandi kutenga chinhu chavanoda pamusana wekukwikwidza. Uyezve, mamwe mabhuku anokosha anoshumira kutarisa kuchinja kwekutengeswa kweimwe chigadzirwa. Semuenzaniso, software yepaIndaneti iyo inonzi CamelCamelCamel inopa vateereri nezveruzhinji pane imwe neimwe kusimudza kana kudonha kwemutengo. Kunewo mamwe maAmerica anotengesa zvikwata zvekutsvaga izvo zvinonyanya kusimbisa nzira yekusimbisa chiremera chekambani kuAmazon - yachtmaster 2 replica review blog.
Muchidimbu ichi, tichakurukura mabhuku ekutsvaga vatengesi veAmerica uye Amazon analytical tools.
Amazon matengesi ekutsvaga vatengesi
Vose vanoona vatengesi vekutengesa kuInternet vanofanira kuramba vachiongorora nzira yake yekugadzirisa kubudirira uye kuwedzera purogiramu yakawanda pane imwe nguva yakajeka. Muchikamu chino tava kuzokurukura zvakanakisisa zvinotengeswa neAmerica Seller zvinogona kukuunza mubayiro wakakura. Zvinonzwisisika kushandisa zvishandiso izvi zvekutsvaga mumatambudziko sezvo vari kuwirirana pamwe uye zvinogona kukubatsira kuti uwane kabhiri uye katatu Amazon yako mari.
Kuti usvike pachikwata chepamusoro kuGoogle tsvaga tsvakurudzo peji, unofanirwa kubhadhara kunyanya kuverenga kwako. Iri shanduro rakagadzirirwa kukubatsira kuti ugadzire zvakanyatsogadziriswa mazwi ezvinyorwa-kusvika kuwedzerwa uye kuwedzera kutendeuka kwako, iyo ndiyo imwe yenyika yekutanga Amazon maitiro. Ichi chishandiso chichakubatsira iwe kugadzira tweaks dzinobatsira kuti uwedzere kutengesa kwako uye uvandudze mamwe maAmerica maitiro emitambo panguva iyoyo.
Kudzokorora kugadziriswa kwekuzivikanwa
Nhamba uye hutano hweAmazon yako maitiro anoita basa rinokosha rekusimudzira nzvimbo yako peji. Izvo zvakanakisisa maongororwo aunayo, mikana yakakwirira vanoshandisa zvigadzirwa zvako. Zvinoreva kuti kuongororwa kusina kunaka kunogona kukonzera bounce chidimbu uye kunokonzera rankings kudonha. Kuongororwa kwakaipa kunoitika kuAmazon, kunyange kana iwe une chigadzirwa chakanakisisa. Iwe unofanirwa kutora zvose zvako zvisina kunaka maitiro kuti utarisire mamiriro acho ezvinhu.
AMZ Tracker's Negative Review Zviziviso zvinoshambadzirwa mutengesi zvichakupa mazaziso nguva dzose kana mumwe munhu asiya mhinduro dzisina kunaka. Ichakubatsira iwe pakarepo kugadzirisa pane zvese zvisingabatsiri uye uite zvose zviri musimba rako kugadzirisa dambudziko rako revachitsva. Kana iwe uchikwanisa kugadzirisa nyaya yevashandi nokukurumidza, ivo vanozogona kuchinja kana kuchinja kugadzirisa kwepakutanga.
Kurudzira kuwedzera kweAmabhizimisi kuburikidza ne Analytics
Amazon Analytics inoshandiswa chekutsvaga kwevatengesi vanotadzisa kukura kwebhizinesi renyu reAmazon. Iri shandisai mukana wekuongorora maitiro ekutenga kwevatengi kune vashandi venyu uye kuwana nguva yakavanzika yakakurumbira nguva. Iyo data yakagadzirwa ichakubatsira iwe kuti utungamirire kupambisa PPC Amazon campaign. Uyezve, iyi AMZ Analytics inobatsira kuita mashoko ekutsvakurudza mazwi uye kuratidza kuti mashoko ekutsvaga ari kuita zvakanaka uye ndeapi anofanira kuongororwa. Nekubatsirwa kwema Amazon Analytics grafu, unogona kutarisa yako yakawanda mari yevhiki, mwedzi, kana gore. Ichakuratidza iwe zvinhu zvipi zviri kuita zvakanaka uye apo bhizinesi rako rinoda kuvandudzwa.